ရန်ကုန်သို့ပို့မည့် စိတ်ကြွဆေးပြားပေါင်း သန်း ၃၀၀ ထုတ်နိုင်သည့် မူးယစ် ဓာတုကုန်ကြမ်း (၁၅ တန်) ကို နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ ထုတ်ပြန် – WunYan
ရန်ကုန်သို့ပို့မည့် စိတ်ကြွဆေးပြားပေါင်း သန်း ၃၀၀ ထုတ်နိုင်သည့် မူးယစ် ဓာတုကုန်ကြမ်း (၁၅ တန်) ကို နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ ထုတ်ပြန်
ထိုင်း မူးယစ်နိမ်နင်းရေး အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ပြုလုပ်သွားတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ယခုလ (၃) ရက်နေ့ က ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မဲစိုင်ကနေ တာချီလိတ်ကို မောင်းသွားတဲ့ ကုန်တင်ကားကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းရိုင် လိုင်စဉ် No. 70-7172 နဲ့ကုန်တင်ကားမောင်းသူ ထိုင်းနိုင်ငံသား စုန်စ၀ပ် ၄၂ နှစ်ကိုလည်း ဆက်လက်စစ်ဆေး နေပါတယ်။ ကားပေါ်မှာတင်လာတဲ့ အနက်ရောင် စည်ပိုင်း အလုံးပေါင်း ၃၀၀ မှာ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ရာနိုက် sodium cyanide ဓါတုဆေး အလေးချိန် ၁၅ တန် ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုင်းဘက်ကနေ သယ်သွားတဲ့သတင်းကို မြန်မာဘက်ကို အချက်အလက် ပေးခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
ဒီဓါတုဆေးတွေကို တာဝန်ယူပို့တဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီဟာ တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းတွေလုပ်ပြီး ထိုင်းကနေ သယ်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ချွန်ဘူရီ ပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို ရေလမ်းနဲ့ပို့ဆောင်မယ်လို့စာရွက်စာတမ်းတွေမှာ ရေးသားထားပြီးမှ ခုလို ရွှေတြိဂံသေကို ကနေ သယ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ မင်္သကာစရာဖြစ်နေပါတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ အလိုရှိနေတဲ့ မူးယစ်တရာခံပြေး Charoenkiat Phornpanit နိုင်ကျလန်ကရက်ကို တာချီလိတ် မှာ ဖမ်းမိခဲ့ပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်က ပြန်လည်လွဲပြောင်း ပေးခဲ့တယ်လို့မူယစ်နိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး Mr. Sirin Yaichachai စီရိရင် ယစ်ချချိုင်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆို သွားပါတယ်။
အဆိုပါတရားခံပြေး ကျလန်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၄၀ အပါအ၀င် ကားသုံးစီး ဆိုင်ကယ် ၈ စီး အိမ်ခြံမြေနဲ့ရွှေ ၄၀ ဘတ်သားပါ စုစုပေါင်း တန်ဘိုး ဘတ်သန်း ၂၀ ကို နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆီးထားလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
Source : SAW
ရနျကုနျသို့ပို့မညျ့ စိတျကွှဆေးပွားပေါငျး သနျး ၃၀၀ ထုတျနိုငျသညျ့ မူးယဈ ဓာတုကုနျကွမျး (၁၅ တနျ) ကို နှဈနိုငျငံ ပူးပေါငျး ဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ကွောငျး ထိုငျးအစိုးရ ထုတျပွနျ
ထိုငျး မူးယဈနိမျနငျးရေး အဖှဲ့က ဒီကနေ့ ပွုလုပျသှားတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ယခုလ (၃) ရကျနေ့ က ထိုငျးနိုငျငံ မွောကျပိုငျး မဲစိုငျကနေ တာခြီလိတျကို မောငျးသှားတဲ့ ကုနျတငျကားကို မွနျမာအာဏာပိုငျတှကေ ဖမျးဆီး စဈဆေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ခငျြးရိုငျ လိုငျစဉျ No. 70-7172 နဲ့ကုနျတငျကားမောငျးသူ ထိုငျးနိုငျငံသား စုနျစဝပျ ၄၂ နှဈကိုလညျး ဆကျလကျစဈဆေး နပေါတယျ။ ကားပျေါမှာတငျလာတဲ့ အနကျရောငျ စညျပိုငျး အလုံးပေါငျး ၃၀၀ မှာ ဆိုဒီယမျဆိုငျရာနိုကျ sodium cyanide ဓါတုဆေး အလေးခြိနျ ၁၅ တနျ ရှိကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ ထိုငျးဘကျကနေ သယျသှားတဲ့သတငျးကို မွနျမာဘကျကို အခကျြအလကျ ပေးခဲ့တယျလို့ လညျး သိရပါတယျ။
ဒီဓါတုဆေးတှကေို တာဝနျယူပို့တဲ့ တရုတျ ကုမ်ပဏီဟာ တရားဝငျ စာရှကျစာတမျးတှလေုပျပွီး ထိုငျးကနေ သယျတာလို့ ဆိုပါတယျ။ ခြှနျဘူရီ ပွညျနယျကနေ ရနျကုနျကို ရလေမျးနဲ့ပို့ဆောငျမယျလို့စာရှကျစာတမျးတှမှော ရေးသားထားပွီးမှ ခုလို ရှတွေိဂံသကေို ကနေ သယျဆောငျတယျဆိုတာ မင်ျသကာစရာဖွဈနပေါတယျလို့ ဖျေါပွထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ထိုငျးနိုငျငံ အလိုရှိနတေဲ့ မူးယဈတရာခံပွေး Charoenkiat Phornpanit နိုငျကလြနျကရကျကို တာခြီလိတျ မှာ ဖမျးမိခဲ့ပွီး မွနျမာအာဏာပိုငျက ပွနျလညျလှဲပွောငျး ပေးခဲ့တယျလို့မူယဈနိမျနငျးရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး Mr. Sirin Yaichachai စီရိရငျ ယဈခခြိုငျးက ထုတျဖျောပွောဆို သှားပါတယျ။
အဆိုပါတရားခံပွေး ကလြနျရဲ့ ပိုငျဆိုငျတဲ့ မွနျမာကပျြငှေ သိနျး ၄၀ အပါအဝငျ ကားသုံးစီး ဆိုငျကယျ ၈ စီး အိမျခွံမွနေဲ့ရှေ ၄၀ ဘတျသားပါ စုစုပေါငျး တနျဘိုး ဘတျသနျး ၂၀ ကို နိုငျငံတျောပိုငျအဖွဈ သိမျးဆီးထားလိုကျပွီလို့ သိရပါတယျ။